I-Aquarius kunye neCapricorn Compatibility: ♥ Iindalo ezahlukeneyo - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
I-Aquarius kunye neCapricorn Compatibility: ♥ Esi sibini sineeNdawo ezahluke kakhulu
Ukuhambelana kwe-Aquarius kunye neCapricorn kuyabanda kwaye kukude, oko kuthetha ukuba intlantsi yabo kunye nomtsalane awusoze ubenalo ithuba lokuphuhlisa nantoni na.
Ngelixa iCapricorn inamathele kakhulu kwizithethe zabo kunye nemilinganiselo yentsapho, i-Aquarius intle kakhulu ichasene ngqo kwaye iyasokola ukuqonda esi simo. I-Capricorn ngokungathandabuzekiyo i-pragmatic kakhulu kune-Aquarius, kodwa le yokugqibela inokuhlalutya kwaye ibanda ngenxa yobume babo bobulumko. Ngaloo ndlela, olu manyano lunokuswela imfudumalo yabantu kunye nayo yonke intlantsi ebalulekileyo yesini. Umhlaba noMoya azixubeki kakuhle kwaye, kule meko, ubudlelwane bunokuba nzima kubo bobabini. Kwelinye icala Aquarius: ethereal, egcwele amaphupha kunye nezicwangciso zekamva. Ngakolunye uhlangothi, iCapricorn, egcina iinyawo zakhe emhlabeni kuzo zonke iindleko. Funda kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nokuhambelana kwabo kwaye ufumane amanqaku abo othando.
'I-Aquarius kunye neCapricorn zivela kwiiplanethi ezimbini ezahlukeneyo.'
I-Aquarius kunye neCapricorn ehambelanayo amanqaku: 1/5
Apha sinabantu ababini abahluke kakhulu abaneemo ezahlukeneyo kakhulu! ubuntu Capricorn kufuneka baziqhelanise nabantu abanokubathemba kunye nabathembekileyo, abanyanisekileyo nabazinzileyo. U-Aquarius uthanda ukonwaba kunye neCapricorn, kodwa ubungangamsha buka-Aquarius bungongeza uxinzelelo kubudlelwane kwaye bubumise ngenene kumkhondo. U-Aquarius ufumanisa ukuba iCapricorn inzima kakhulu kwaye inzima kakhulu. Bobabini i-Aquarius kunye neCapricorn babeka ukubaluleka okukhulu kwinkululeko yabo yiyo loo nto bekwazi ukusebenzisana kakuhle emsebenzini okanye njengabahlobo. Iincoko zabo zityebile kwaye zinengqondo ezinokuthi zongeze izinongo kubudlelwane babo. UCapricorn uthanda ukuhlalutya amaphupha ka-Aquarius kwaye acebise izisombululo zokuwaqonda kwaye u-Aquarius uyakuthanda ukwabelana ngeengcinga zabo ezigwenxa kunye neCapricorn.
- Thatha wethuuvavanyo lokuhambelana kothando lwezodiacApha -
Ngaba u-Aquarius kunye noCapricorn banobudlelwane obuyimpumelelo?
Xa kuziwa kumdlalo wothando, le duo inzima kakhulu kwaye inokuswela ubushushu obufunekayo ukuze uphumelele. Banengxaki yokwenza umdlalo olungileyo wothando kuba iCapricorn iyinto ehlala yedwa kune-extrovert Aquarius. Baza kuba nobunzima bokuqonda omnye nomnye kodwa ubudlelwane babo abupheli. Ke, banokubeka iiyantlukwano zabo ecaleni ukuze bakhe isibini esiqinileyo kwaye baphindaphinde iiprojekthi zabo. Ngakolunye uhlangothi, sinomoya ocingayo we-Aquarius, okhetha inkululeko kumsebenzi wokulandela imithetho. kwaye kwelinye, iCapricorn, ezama ukwenza ubomi bube liqela leparameters. Ukuba bobabini banomonde kunye nothando olufunekayo ukudibanisa la macala mabini, olu lwalamano lunokusebenza, kodwa ngeendleko zexesha elininzi kunye nokufumaneka kumacala omabini. Xa ubudlelwane buqala ukukhula, izinto ziya kuba lula kwaye ukuzinikela kuya kuba nezinto ezininzi zokufunda kule miqondiso mibini.
Funda ngakumbi malunga noku ngena Iinyani ezili-15 malunga no-Aquarius -
Yintoni enokusiwisa esi sibini?
U-Aquarius ukhangwa kwixesha elizayo kunye nayo yonke into ebandakanya ukujonga phambili, kanti iCapricorn ithanda izinto ezinxulumene nexesha elidlulileyo. Ulwalamano lwabo luya kuba kuphawulwa kukungavisisani okuninzi kwaye omabini amaqabane kuya kufuneka enze iminyinyiva emininzi ukuze ihlale ihleli! Othandweni kunye nakwimbono yentsapho, ubudlelwane babo bunzima ngakumbi. Okokuqala, abanabubele bobuntu! Abatyekelanga kwizibhengezo nangakumbi ekuphalazeni iimvakalelo. Ngaphezu koko, othembekileyo, umntu wasekhaya, yedwa kunye nomnini weCapricorn unenkathazo eninzi yokwenza i-duo kunye ne-Aquarius edibeneyo, ephumayo kunye ne-multi-connected!
Buya kuba njani ubomi babo bokwabelana ngesondo?
Kunokubakho izixhobo zomlilo kwigumbi lokulala okanye kungabikho konke konke, i t ixhomekeke kwimeko yengqondo yaba bantu babini bomthonyama. Ngabo, yonke into ihlala yonke okanye akukho nto ...
Iingcebiso zothando kwesi sibini
Thethani ngamaphupha enu kwaye nabelane ngamabhongo enu. Zombini iimpawu ezincanyathiselwe kakhulu kukuzimela kwabo, nangona kunjalo baya kuba nakho ukuqonda zabo imfuneko efanayo yenkululeko kwaye ngaphakathi kwesakhelo sobuhlobo okanye umsebenzi ofanayo, banokuncedisana.
Ukubona i-23: i-32 i-Reversed Mirror Hour ngumqondiso wokuba abantu basasaza amahemuhemu
Ingaba iNyanga nganye iyichaphazela njani iSex Drive yakho?